people Nepal » पत्रकारितामा म फुक्काफाल साँढेका रूपमा हुर्कें : नारायण वाग्ले पत्रकारितामा म फुक्काफाल साँढेका रूपमा हुर्कें : नारायण वाग्ले – people Nepal
(हाँस्दै…) हो । त्यही भएर त हामी कम्फर्ट जोनमा छौँ । एक किसिमले मिडियाको ट्र्यापभित्र छौँ । यहीँ पत्रकारिताको प्रश्न छ । हामीले दैनिक पत्रकारिताका साश्वत प्रश्नहरूलाई कसरी उठाउने भन्ने चरणमा छौँ । खुमलटारमा कृषि अनुसन्धानको विशाल संरचना छ तर वर्षभरिमा तपार्इंले एउटा पनि समाचार भेटाउनु हुन्न जब कि तपार्इंले त्यहाँ भैरहेका अनुसन्धानमूलक कामको समाचार र स्टोरीहरू पढ्न पाउनुपर्ने हो । के हामी आफै त्यसबारे सुचित छौँ ?
अत्यन्त गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । कान्तिपुरमा छँदा मलाई त्यो महत्वपूर्ण दिनको रूपमा सम्झना छ, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए अनि हाम्रा साथीहरूले अब नेपालमा बस्न नसकिने भयो भनेर एकाध साथीहरू समाचार कक्षमै बियर खाएर आएर घडी फुटालेर देशै छोड्ने कुरा गरे । (हा हा हा लामो हाँसो…) त्यतिखेरको कस्तो थियो भने कम्युुनिस्ट आएपछि एक किसिमको पत्रकारमा सबै सकियो भन्ने धारणा हावी थियो । बूढाबूढीलाई मार्छ भन्नेदेखि अनेक बुझाइहरू हावी थिए । कित्ताकाट हाम्रो पत्रकारिताको वास्तविक अवस्था हो । काङ्ग्रेसको पत्रकार, एमालेको पत्रकार, माओवादीको पत्रकार भन्ने । नभए कुनै पनि पत्रकारलाई प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरको सदस्य भएर हिँड्न मिल्छ ?
(मुसुमुसु हाँस्दै…) निकै राम्रो प्रश्न । मानिसहरू यस्तो प्रश्न सोध्दैनन् तर, यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । माओवादीलाई हेर्ने सवालमा कान्तिपुरमा छँदा हामीले माओवादीको ‘ग्ल्यामराइज’ गरेर सारै धेरै प्रचार गर्यौँ र कान्तिपुरले नै माओवादी बढायो भन्ने लाञ्छना हामीले हाम्रै समाजबाट बेहोर्यौँ । माओवादीको ‘रोमेन्टिसाइज’ गरियो भन्ने अपगाल पनि बेहोर्यौँ । त्यसैले हतियार छोडाउनु र राजनीतिक संवाद गराउनु नागरिकको मुख्य अभीष्ट थियो । समाजमा द्वन्द्व हुन्छ तर द्वन्द्वरत पक्षका बीचमा हतियार छोडाउनु र राजनीतिक संवादमा ल्याउनु हाम्रो मुख्य अभीष्ट रहिरह्यो ।